Madaxda Kooxda Manchester United oo la kulmay la taliyaha Macallin Ole Gunnar Solskjaer – Gool FM
Athletic Bilbao oo guul dahabi ah kaga gaartay Barcelona kulankii furitaanka horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedka cusub 2019-20… + SAWIRRO
Zidane oo soo saaray liiska xiddigaha Real Madrid ee wajihi doona kulanka Celta Vigo… (Miyeey ku jiraan Bale iyo James Rodríguez?)
(Manchester) 10 Feb 2019. Guddoomiye ku xigeenka fulinta Manchester United ee Ed Woodward iyo ninka iska leh kooxda ee Avram Glazer ayaa la kulmay la taliyaha macallin Ole Gunnar Solskjaer ninka la yiraahdo Jim Solbakken kaddib markii ay 3-0 Sabtidii uga adkaadeen naadiga Fulham.
Tababare Solskjaer ayaa shaqada Macallinnimo ee kooxda Man Utd ka bedelay Jose Mourinho bishii December, wuxuuna kooxda u noqday mid nasiib u leh oo guulo ku hoggaamiya.
Man United ayaa guul gaartay 10 oo ka mid ah 11-kii kulan oo uu xilka hayey Solskjaer waxaana ku jira siddeed ka mid ah sagaalkii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, taasoo keentay in kooxdu ay soo gaarto kaalinta afaraad ee kala sarreynta horyaalka Ingiriiska.
Solskjaer ayaa u muuqda mid loo magacaabi doono tababaraha joogtada ah ee Manchester United, inkastoo macallinka kooxda Tottenham Hotspur ee Mauricio Pochettino ay dadka qaar u arkaan mid ay kooxdu xiisaynayso.
Jariiradda The Mirror ayaa daabacday in Solbakken uu la kulmay Woodward iyo Glazer kaddib guushii Fulham si ay uga wadahadlaan qorshaha ku aaddan kooxda ee macallin Solskjaer, kaasoo naadiga ka dhisan Old Traffrod hoggaamin doonta kulanka lugta hore ee wareegga 16-ka Champions League oo ay Talaadada wajihi doonaan Paris Saint-Germain.
Man United ayaa kulankeeda xiga ee horyaalka Premier League waxa ay garoonkeeda kula ciyaari doontaa kooxda tartanka ugu jirta inay ku guuleysato horyaalka Ingiriiska ee Liverpool, 24-ka bishan Febraayo.